खोपलाई व्यापक बनाउ : RajdhaniDaily.com
Home बिचार खोपलाई व्यापक बनाउ
पछिल्लो समयमा चीनबाट कोरोनाविरुद्धको खोप नेपालमा भित्रिए पनि त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिएको छैन । सहयोगस्वरूप प्राप्त १० लाख डोज चिनियाँ खोप अहिले पनि कोल्डस्टोरमै थन्क्याइएको छ । जनता खोपको पर्खाइमा रहेकाबेला देशभित्र भित्रिएको खोप जनतालाई नलगाइनु आफंैमा आश्चर्यको विषय भएको छ । यसबारे सरकारले कुनै पनि आधिकारिक कुरा सार्वजनिक गरेको छैन । एकातिर कोरोना महामारीको दोसो चरण निकै संगीन बनेर देखापर्नु र अर्कोतिर सरकार स्वयं देशभित्र भित्रिएको खोपबारे अञ्जानजस्तो देखिनु संयोग नभएर एक विडम्बनाको कुरो हुन गएको छ । सरकार स्वयंले आधिकारिक रूपमा चिनियाँ खोप भिœयाइसकेपछि यसको प्रयोग जनताबीच नगरिनु वा गर्न हिचकिचाइनु अलि केही रहस्यमय बनेको छ । भारतबाट भिœयाइएको कोभिसिल्डको दोस्रो खोप लगाइसक्दा चिनियाँ खोप पनि सुरु गरिनुपर्छ भन्ने स्वास्थ्य विज्ञको सुझाव ख्याल गरेको पनि देखिँदैन । खोपले इम्युनिटी पावर विकास गर्ने र संक्रमित तथा सम्भावित संक्रमितका लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुने भएकाले यो बखतमा खोप अनिवार्य बन्न गएको छ । यो कुरा आधिकारिक रूपमा बाहिर आउन नसक्नु र सरकार पनि यसबारेमा बोल्न नसक्नु आफंैमा दुःखको कुरो बन्न पुगेको छ ।
खोप लगाउन आवश्यक जनशक्ति नभएको पनि होइन । देशव्यापी रूपमा सरकारका जनस्वास्थ्य शाखा छन् । हरेक गाउँगाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र छन् र उनीहरूका कहाँ पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिन जनता आतुर छन् । तर, त्यो चाहनाअनुरूप सरकारले चाल्नुपर्ने कदममा तदारुकता आएको देखिँदैन । कोभिसिल्ड खोप वा चीनबाट भिœयाइएका खोप नै महामारी संक्रमण नियन्त्रणका रामवाण हुन् भन्ने कुरा त होइन तर पनि महामारी नियन्त्रणका लागि यी खोप केही बढी भरपर्दा नियन्त्रक उपचारका पद्धति भने अवश्य हुन् । सरकारले यसमा शीघ्र देशमा उपलब्ध खोप जनताबीच वितरण गर्न सक्नुपर्छ । यसले मात्र जनताले समयमै स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् । जनता र स्वास्थ्यविद्का बीचमा भारतीय कोभिसिल्ड खोप पनि राम्रोसँग वितरण नगरिएको र चिनियाँ खोप वितरणका लागि कदम नै नचालिएको विषयलाई लिएर केही बहस उठिरहेका पनि छन् । संकटका बेला जनताको रक्षक, संरक्षक, अभिभावक भनेको सरकार नै हो । महामारीको संकटको यस घडीमा सरकारले नै पहल कदमी लिन सकेन भने निजी संघसंस्थाले पहल कदमी लिएर समस्या नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था त झन् हुँदैहुँदैन । यस कुरालाई मनन गरी खोप वितरणबारे सरकारले निकै ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।
निजी संघसंस्थालाई साथमा लिएर समस्या समाधान गर्न अग्रसर हुने बेलामा आफंैले पहल कदमी नलिनु सरकारका लागि अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुन सक्ने नकारात्मक असर पनि हो । यसलाई मध्यनजर गरी सरकारले समय छँदै जनताको वास्तविक अभिभावकका रूपमा खोप विस्तार गर्ने पहल कदमी लिनु जरुरी छ । अपुग खोप मगाइँदा लाग्ने समयका लागि जनताले पर्खिनु, केही समय आशावादी रहनु र खोप नै नभएको विकल्पमा संक्रमणको सामना गर्नु एउटा कुरा हो तर देशभित्र खोप भित्रिएका बेला त्यसलाई यथासमयमै उचित वितरण गर्न नसक्नु निकै ठूलो कमजोरी हो । यो कमजोरी सरकारले बेलमै सच्याउन जरुरी छ र यथाशीघ्र जनस्वास्थ्य सुधारका लागि कार्यक्रम ल्याइनु पनि उत्तिकै जरुरी हुन गएको छ । हाललाई पहिलो चरणको प्रभावकारी कदमका रूपमा देशभित्र रहेको खोपको उचित वितरण गर्नु नै बढी श्रेस्कर हुने देखिन्छ ।
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - April 20, 2020 0
लन्डन । प्रशिक्षक रोर्बेटो मान्चिनीले स्विडिस फरवार्ड ज्लाटान इब्राहिमोभिच लियोनल मेस्सी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोकै स्तरका फरवार्ड रहेको जिकिर गरेका छन् । इब्राहिमोभिच स्विडेनका पूर्वकप्तान...
‘यहाँ मास्क छैन’ : अनुगमन भएन
प्रदेश ३ राजधानी समाचारदाता - March 8, 2020 0
भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिका–१ च्यामासिंहस्थित साँचो फार्मेसीले ‘यहाँ मास्क छैन’ भन्ने बोर्ड नै टाँसेको छ । त्यहाँ मात्रै होइन, यहाँकै च्यामासिंह मेडिकल, आरती फर्मालगायत...
फेरी काठमाडौँमा बर्डफ्लु देखियो
Breaking News कौशिला कुँवर - May 26, 2021 0
काठमाडौँ । काठमाडौमा फेरि बर्डफ्लु रोग देखापरेको छ । काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. ४ र ९ र चन्द्रागिरिमा नगरपालिकाको वडा नं. २ का...
प्रदेश ५ राजधानी समाचारदाता - March 31, 2020 0
गुल्मी । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले अति विपन्न परिवारलाई राहत वितरण सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ वाग्लाबाट राहत वितरण सुरु...
प्रदेश १ राजधानी समाचारदाता - May 28, 2020 0
विराटनगर । प्रदेश नं १ का थप चारजना कोभिड–१९ का सङ्क्रमित निको भई घर फर्केका छन् । कोशी अस्पताल (कोभिड–१९) उपचार केन्द्रमा उपचारार्थ उदयपुरको भुल्केका...
अर्थ राजधानी समाचारदाता - May 14, 2020 0
Editor-Picks राजधानी समाचारदाता - February 16, 2021 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार सरकारका तीनवर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकाल सफल भएको र यस अवधिमा...